आमिर खानले गरे प्रेमिकासँग गुपचुप बिहे ! | CineSandesh
Home अन्तर्वाता आमिर खानले गरे प्रेमिकासँग गुपचुप बिहे !
अहिले भने उनले गुपचुप आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गरेको हल्ला फैलिएको छ। बलिउड लाइफका अनुसार हाल आमिर आफ्नो ‘दंगल’ फिल्ममा सँगै अभिनय गरेको अभिनेत्री फतिमा साना शेखसँग प्रेम सम्बन्धमा छन्। यससँगै केही दिन यतादेखि सामाजिक सञ्जालभर उनीहरुको एउटा फोटो भाइरल भइरहेको छ। जसले गर्दा प्रशंसकले उनीहरु वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको अनुमान गरेका हुन्।
Previous articleप्रभासको नयाँ चलचित्र राधेश्यामको ट्रेलर सार्वजनिक (हेर्नुहोस)
Next articleकपिल शर्मा शोमा पुगेर एनटिआर र रामचरणले के गरे?